सभापति देउवालाई विधान मिच्ने बानी नै परिसक्यो : रामचन्द्र पौडेल – Deep Sanchar
Wednesday, October 13,2021 / मंगलबार, असोज २६, २०७८
गृहपृष्ठ ∕ विचार ∕ सभापति देउवालाई विधान मिच्ने बानी नै परिसक्यो : रामचन्द्र पौडेल
सभापति देउवालाई विधान मिच्ने बानी नै परिसक्यो : रामचन्द्र पौडेल
जीएनएन साउन २८, २०७७ गते १९:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विधान मिच्ने बानी नै परिसकेको बताएका छन् । पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि विभाग गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्षले सभापति देउवाको विरोध गर्दै आएको छ ।
नेता पौडेलले सभापति देउवाले विधान मिचेर पटकपटक विभागहरु गठन गरेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको तर उनमा विधान जति मिच्नसक्यो त्यति बहादुर र बलवान ठहर्छु भन्ने मानसिकता रहेको पाइएको बताए ।
देउवामा विधान मिच्दा बहादुर ठहर्छु भन्ने मानसिकता रहेको टिप्पणी पनि उनले गरेका छन् ।बुधबार कुरा गर्दै नेता पौडेलले सभापति देउवाले विधान मिचेर पटकपटक विभागहरु गठन गरेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको तर उनमा विधान जति मिच्नसक्यो त्यति बहादुर र बलवान ठहर्छु भन्ने मानसिकता रहेको पाइएको बताए । विधान मिचेर बहादुरी देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी प्रजातान्त्रिक हो कि होइन भन्ने खतरा बढेको पनि उनले बताए ।
‘हामीले बारम्बार पार्टीलाई विधानमा ल्याउन पार्टी सभापतिलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आयौं । तर, नेपाली कांग्रेसभित्र कस्तो भएको छ भने विधान मिच्नु बहादुरी हो जस्तै हाम्रो सभापतिलाई लाग्छ की ? विधान मैले जति मिच्न सके म त्यति बलवान सभापति ठहर्छु भन्ने उहाँको मानसिकता छजस्तो मलाई लाग्छ । त्यसले यो पार्टी डेमोक्रयाटिक पार्टी नै हो की होइन भन्ने खतरातिर जान लाग्यो भनेर हामी चिन्तित भएको हो ।’
मलाई सम्झना छ यो देशमा कानून तोड्यो भने गृहमन्त्रीले तोड्छ म गृहमन्त्री भएको हुनाले मैले हो तोड्ने कानून भनेर धाक लगाएर हिँडनुहुन्थ्यो एकताका । उहाँलाई जे बोले पनि सबैले हाँसेर लिइदिन्थे । अहिले पनि उहाँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको यो बहादुरीले कांग्रेसलाई क्षति पुर्‍यायो । यसले लोकतन्त्रलाई अत्यन्त ठूलो घात गर्‍यो, क्षति पुर्‍यायो र घायल बनायो ।’
उनले भने, ‘हाम्रो सभापति मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ । मलाई सम्झना छ यो देशमा कानून तोड्यो भने गृहमन्त्रीले तोड्छ म गृहमन्त्री भएको हुनाले मैले हो तोड्ने कानून भनेर धाक लगाएर हिँडनुहुन्थ्यो एकताका । उहाँलाई जे बोले पनि सबैले हाँसेर लिइदिन्थे । अहिले पनि उहाँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको यो बहादुरीले कांग्रेसलाई क्षति पुर्‍यायो । यसले लोकतन्त्रलाई अत्यन्त ठूलो घात गर्‍यो, क्षति पुर्‍यायो र घायल बनायो ।’
पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न नसके पार्टी संकटमा पर्न सक्छ भन्दै आफूले ३ वर्ष अघिदेखि कार्यतालिका बनाएर काम गरौं भनेको तर सभापति देउवाले नमानेको पौडेलले बताए । महाधिवेशन गर्ने समयमा असाधारण स्थिति भयो भन्दै पछाडि धकेलेको र अहिलेको असाधारण अवस्थामा गर्न लागिएको महाधिवेशनमा विधान मिच्दै महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने सभापति अहिले कामचलाउ मात्रै भएकाले कुनै पनि निर्णय एक्लै गर्न नसक्ने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले उहाँलाई धमाधम मान्छे नियुक्त गर्नुछ । कार्यकालै सकिइसकेको कामचलाउ कार्यसमितिले यो गर्न मिल्छ ? यो कुरा हामी भनिरहेका छौं कि यसरी विधानको धज्जी नउडाऔं । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी नउडाऔं ।’
फागुन ७ गतेका लागि मिति तोकेर महाधिवेशनको तयारी सुरु भएकोले अहिले देखि नै आचारसंहिता सबैलाई लाग्ने पनि उनले बताए ।
फागुन ७ गतेका लागि मिति तोकेर महाधिवेशनको तयारी सुरु भएकोले अहिले देखि नै आचारसंहिता सबैलाई लाग्ने पनि उनले बताए । ‘महाधिवेशनमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं । यसलाई क्रियाशीलको अनि वडाको मात्र होइन केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन नभइकन लागू हुँदैन भन्लान् । यो त फेरि जाली कुरा हो नि ! यस्तो गरेर पार्टीको वैधानिक मर्यादामाथि आँच पुर्‍याउन पाइन्छ ?’
पार्टीमा विधान मिचेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने र महाधिवेशनबाट सभापति देउवाको विकल्प खोज्ने पौडेलले बताए ।
पौडेलले पार्टीको सभापति आफै नै हुनुपर्छ भन्ने दावी नगरेको समेत स्पस्ट पारे । उमेरको मात्रै भरमा एउटै क्याटगोरीमा नराख्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘कसले पार्टीको हित हुने कति काम गरेको छ, अहित हुने कति काम गरेको छ त्यो हेर्नुपर्‍यो । मौका पाउँदा कसले सत्ताको कति दुरुपयोग गरेको छ कसले गरेको छैन त्यो पनि हेर्नु पर्‍यो,’ पौडेलले भने, ‘समाज र पार्टीले पनि न्याय गर्नुपर्‍यो ।’
क्याटेगोरी : विचार, समाचार